Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xusuusta Cuntada Cusub: Calaamadda Charcuterie Fortin Salami
Charcuterie L. Fortin Ltée. ayaa dib uga soo celinaysa calaamadda Charcuterie Fortin Salami ee suuqa sababtoo ah waxa ku jiri kara sarreen aan lagu sheegin calaamadda. Dadka xasaasiyadda ku leh sarreenka ama qaba cudurka baruurta ama cilladaha kale ee la xiriira gluten waa in aysan cunin alaabta dib loo soo celiyay ee hoos lagu sharraxay.
Alaabta soo socota ayaa lagu iibiyay Quebec.
brand Product size UPC Xeerarka
Charcuterie Fortin Salami 175 g 6 28555 04100 4 Ugu Fiican Kahor
Hubi inaad gurigaaga ku haysato alaabta la soo celiyay. Alaabooyinka dib loo celiyay waa in la tuuraa ama lagu soo celiyaa bakhaarkii laga soo iibsaday.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay sarreenka ama aad qabto cudurka baruurta ama cilladaha kale ee la xiriira gluten, ha isticmaalin badeecada dib loo soo celiyay sababtoo ah waxay keeni kartaa falcelin halis ah ama nafta halis gelisa.
• Wax badan ka baro xasaasiyadda cuntada ee caadiga ah
Dib u soo celintan waxaa kiciyay shirkadu. Hay'adda Kormeerka Cunnada ee Kanada (CFIA) waxay samaynaysaa baaritaan badbaado cunno ah, taasoo horseedi karta in la soo celiyo alaabtii kale. Haddii badeecadaha kale ee khatarta sare leh dib loo soo celiyo, CFIA waxay ogeysiin doontaa dadweynaha iyada oo loo marayo Digniinta Dib-u-soocelinta Cunnada ee la cusboonaysiiyay.
Ma jiraan wax falcelin ah oo la soo sheegay oo la xidhiidha isticmaalka alaabtan.